Ahoana ny fanesorana ny afara amin'ny sary ao amin'ny Word haingana sy mora | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hanesorana ny background amin'ny sary iray ao amin'ny Word haingana sy mora
Lola curiel | | Tutorials
Word dia iray amin'ireo mpandrindra teny be mpampiasa indrindra. Ny ampahany amin'ny lazany dia azo lazaina amin'ny fahatsorany eo amin'ny lafiny fitantanana, fa koa amin'ny fitaovana sy fiasa marobe atolony. Tena programa feno izy io ary ahafahan'ny mpampiasa manampy votoaty fanampiny amin'ny lahatsoratra, manamora ny fahatakarany, ohatra, amin'ny alàlan'ny fampiasana sary na fampiasana fitaovana fanaovana sary, ary mahatonga azy ho mahasarika kokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hanesorana ny lafin'ny sary iray ao amin'ny Word aho, amin'ny fampiasana ny fitaovana "esory background".. Ny dingana dia tena tsotra ary tena ilaina amin'ny fametrahana antontan-taratasy misy sary tsy misy ambadika na miaraka amin'ny vola noforoninao. Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity ary mahazo azy amin'ny dingana 3 mora.
1 Sokafy ny sary ary apetraho izany mba hahafahana mamindra azy
2 Ampiasao ny fitaovana fanalana lafika
3 Diovy ny safidy mandeha ho azy amin'ny Word
4 Andramo mamorona fiaviana vaovao
Sokafy ny sary ary apetraho izany mba hahafahana mamindra azy
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary ao amin'ny Word izay ho esorinay ny afara. Afaka ataontsika misintona mivantana ny sary mankany amin'ny pejy na azontsika atao tsindrio ny fampidirana > sary > sary avy amin'ny rakitra ary tadiavo amin'ny solosainao izany.
Handeha isika izao hanova ny fomba fit-to-text mba hahafahana mamindra azy malalaka. Raha tsindrio indroa eo amin'ny sary ianao dia handeha mivantana any "format sary", manome ho amboary ny lahatsoratra ary azonao atao ny misafidy ny iray amin'ireto safidy roa ireto: "ao ambadiky ny lahatsoratra" na "eo anoloan'ny lahatsoratra".
Ampiasao ny fitaovana fanalana lafika
Tandremo fa manomboka izao ny ampahany manan-danja amin'ny fampianarana! Raha mijery ny ankavia ambony ianao (eo amin'ny tontonana amin'ny endrika sary) dia manana bokotra milaza ianao "esory ny background". Andao hampihatra izany.
Ho hitanao izao ny ampahany amin'ny sary dia rakotra sosona mavokely, io faritra mavokely io no heverin'ny programa ho "background" ary noho izany dia hofoanana izany. Saingy na izany aza, indraindray tsy hitan'ny Word tsara ny atao hoe "lafo" sy ny tsy, matetika ny ampahany amin'ny lamosina dia miditra ao amin'ny faritra hotehirizina amin'ny sary ary ny mifamadika amin'izany. tsy misy olana, ny famahana azy dia tena tsotra.
Diovy ny safidy mandeha ho azy amin'ny Word
Eo an-tampony dia manana marika roa ianao: plus sy minus. Ireo marika ireo no hanampy antsika hanitsy ny fisafidianana mandeha ho azy ny Word.
Ny "+" dia ahafahanao mamerina ny faritra tiantsika hotehirizina an'ilay sary ary nitsofoka diso tamin'io faritra mavokely io.
Ny "-", manao ny mifanohitra amin'izany, mamela ny hampiditra ao amin'ny faritra mavokely ireo faritra izay anisan'ny ambadika ary tsy hitan'ilay programa.
Samy miasa toy ny karazana borosy. Tsy ilaina ny mandoko ny faritra tianao hanitsiana amin'ny an-tsipiriany, ny fanomezana kely fotsiny dia ampy. Tandremo manokana ny sisiny satria eo matetika no betsaka ny erreur dia ataovy am-pitoniana fa mety hanimba ny fiovan'ny background-nao io karazana tsy fahombiazana io. Rehefa faly amin'ny vokatra ianao tsindrio ny keep changes.
Andramo mamorona fiaviana vaovao
Raha nahavita izany lavitra izany ianao dia efa vitanao ny nanala ny afara tamin'ny sary! Ankehitriny, omeo malalaka ny eritreritrao ary miezaka mamorona vola vaovao. Ny hevitra tsara hahazoana compositions mahaliana dia ampidiro ny endrika ary milalao amin'ny habe sy loko.
Rehefa mampiditra endrika, mba hisakanana azy tsy hihazakazaka eo anoloan'ny sary, tsindrio indroa eo amin'izy ireo ary tsindrio "Form format> handamina> mandefa miverina> mandefa miverina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hanesorana ny background amin'ny sary iray ao amin'ny Word haingana sy mora
Inona no atao hoe brutalist design?